Powerjet သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ - Powerjet ပလတ်စတစ် Machinery
အောက်ပါကျနော်တို့ခုနှစ်တွင် (Powerjet ပလတ်စတစ်စက် CO ။ , LTD မှ။ ) ကြှနျုပျတို့၏ website (www.powerjetmachine.cn) ကိုအသုံးပြုသည်လာသောအခါဒေတာကိုစုဝေးစေမည်သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။ personal data ဥပမာနာမည်, လိပ်စာ, e-mail, လိပ်စာများ, အသုံးပြုသူအပြုအမူ, IP လိပ်စာများအဘို့အပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသည်သင်နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါတယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပူဇော်သက္ကာကိုအတွင်းသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုသုံးပါချင်ပါတယ်လျှင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအဘို့တာဝန်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပေါ်အားကိုးလျှင်, ငါတို့သည်အောက်ကသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်၌သင်တို့ကိုအကြောင်းကြား။
နေရပ်လိပ်စာ: No.5, ChuangXin လမ်းမကြီးအနောက်, ဇုန်ကို C, SanShui စက်မှုပန်းခြံ, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာဖြစ်ပါသည်: www.powerjetmachine.cn ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website တက်မခေါ်လျှင်, သင်၏ကိရိယာပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့ဘရောက်ဇာကိုအလိုအလျှောက်ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းအချက်အလက်ပို့ပေးသည်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုတိုင်းတွင်အောက်ပါဒေတာကိုသင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်တစ်စုံတစ်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမပါဘဲစုဆောင်းနေသည်:
သင့် IP လိပ်စာ
သင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြ (အမှန်တကယ်စာမျက်နှာ) ၏အကြောင်းအရာ
အဆိုပါ access ကိုအဆင့်အတန်း / သည် HTTP status ကိုကုဒ်
Operating system နှင့်၎င်း၏အင်တာဖေ့စ
ကျနော်တို့သိုလှောင်မှုမရှိတော့လိုအပ်တစ်ချိန်ကဤအခြေအနေတွင်ထုတ်လုပ်ဒေတာကိုဖျက်, ဒါမှမဟုတ်ပြဌာန်း retention ကိုလိုအပ်ချက်များကိုလျှောက်ထားဘယ်မှာအပြောင်းအလဲနဲ့ကန့်သတ်။
2.3) သတင်းလွှာစာရင်းပေးသွင်းထားသူများ '' ပြန်ကြားရေး
သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့သတင်းလွှာစာရင်းသွင်းသည့်အခါငါတို့သည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာစုဆောင်းနိုင်တယ်:
သင့်ရဲ့ browsing အတွက်လှုပ်ရှားမှုများ
သင်တို့သည်ငါတို့၏အခမဲ့သတင်းလွှာစာရင်းသွင်းရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်ထို့အပွငျ, သငျသညျ e-mail, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ဝေဆောင်းပါးများနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျအနာဂတျမှာအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိခြင်းမှနှုတ်ထွက်ချင်ပါတယ်သည့်အချိန်တွင်မဆို recommend.If န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကလက်ခံရယူလိမ့်မယ်, ငါတို့အဘို့အအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များပါဝင်သည် တစ်ဦးချင်းစီကိုအီးမေးလ်၏အောက်ခြေတွင်ဆက်လက်မရယူရန်လုပ်ရာတွင်။
သငျသညျ (ဥပမာ Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ မှာ, Youtube ကို, သို့မဟုတ်အခြားသူများကဲ့သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မည်သည့်လူမှုမီဒီယာ features တွေအသုံးပြုမှုစေလျှင်, ဆိုရှယ်မီဒီယာပံ့ပိုးပေးမိမိတို့၏မူဝါဒများနှင့်အညီကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့လိမ့်မည်။ အဲဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်၏နာမကို, ပရိုဖိုင်ပုံ, ကျား, မ, မိတျဆှေစာရင်းများနှင့်သင်ရရှိနိုင်စေရန်ရှေးပါပွီအခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်နိုင်သည်။ သင်ခွဲဝေမှုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ကအခြားလူမှုမီဒီယာပံ့ပိုးပေးဘို့သင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ privacy setting များသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာ setting များကို / preferences သည်ကိုတည်းဖြတ်သဖြင့်ဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ (နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်တတိယပါတီဒေတာပရိုဆက်ဆာ), စုဆောင်းစတိုးဆိုင်နှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာကို process စခွေငျးငှါ:
သင်ဤ website ကိုအတူများကိုပေးစွမ်းနှင့်အကြောင်းအရာအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးနှင့်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်လျော်သောလမျးညှနျ
သင့်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အတူငါတို့သည်သင်တို့စိတ်ဝင်စားနိုင်ထင်ထားတဲ့မြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို e-mail, အားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်
သုတေသန, analysis စမ်းသပ်ခြင်း, စောင့်ကြည့်မှု, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်
မည်သည့်ဆက်စပ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာကျနော်တို့ (ရာဇဝတ်မှုနှင့်လိမ်လည်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ရည်ရွယ်ချက်များအပါအဝင်) သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ရန်တရားဝင်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်တာဝန်ရှိ
အပြင်ကျနော်တို့စုစုပေါင်းစာရင်းဇယားသို့မဟုတ်အစီရင်ခံရည်ရွယ်ချက်များ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်. Anonymous အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ကုန်သွယ်ရောင်း, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်အပြင်ဘက်ပါတီများမှ (ကတတိယပါတီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရရှိသည်ဆိုပါကကြွင်း) သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းမပေးပါဘူး။
ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှာ operating ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပို့ချခြင်းသို့မဟုတ်သင်တို့သည်ဤမျှရှည်လျားသောသူတို့အားပါတီများလျှို့ဝှက်ဤအချက်အလက်စောင့်ရှောက်ဖို့သဘောတူအဖြစ်, servicing အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသူကိုယုံကြည်စိတ်ချတတိယပါတီမပါဝင်ပါဘူး။
ကျနော်တို့လည်းငါတို့လွှတ်ပေးရန်ဥပဒေနှင့်အလိုက်လျောဖို့သင့်လျော်သောယုံကြည်အခါ, သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြန့်ချိကျွန်ုပ်တို့၏ site မူဝါဒများပြဋ္ဌာန်းရန်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဥစ်စာကိုကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်အခြားသူများအခွင့်အရေး, အိမ်ခြံမြေ, ဒါမှမဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလိမ့်မည်။
တတိယပါတီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရရှိသည်နှင့် / သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုသောဖြစ်ရပ်အတွက်ကျနော်တို့ဝယ်ယူနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်တတိယပါတီမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data ကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏သတင်းလွှာပေးသွင်းပြီးနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့မှစေလွှတ်သော e-mail, ဆက်သွယ်ရေးကနေနှုတ်ထွက်လိုလျှင်, သင်ငါတို့စေလွှတ်ကြပါပြီမည်သည့် e-mail, သတင်းလွှာ၏အောက်ဆုံးမှာယူမှုဖျက် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒီလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ access ကိုလိုလျှင်, သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အဆက်အသွယ်ပုံစံများကိုတစ်ဦးသုံးပြီးပို့သောသတင်းအချက်အလက် (သို့မဟုတ်သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ပါစေသည်ဟုမဆိုမှတ်ချက်တခု) ကိုဖျက်ပစ်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ, သင် info@powerjetmachine.cn ဖို့တောငျးဆိုခကျြကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတှေ့ရကွောငျးအဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု. သင့်အကြောင်းကိုင်သောသတင်းအချက်အလက် delete သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံ, access ကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုမမေးပေမည်။
6. Cookie ပေါ်လစီ
6.1) မှာ cookie ကိုကဘာလဲ?
တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်တစ်ဦး cookie ကိုသငျသညျ website တစ်ခုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါအသငျသညျအကောငျးဆုံးအတှေ့အကွုံအရသေချာကူညီဖို့ရန်သင့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုအပေါ်ထားရှိကြောင်းသေးငယ်တဲ့စာသားဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။
6.2) အဘယ်ကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် cookies များကိုအသုံးပြုပြောဆိုပါသနည်း
သူတို့ရဲ့ခြေရာခံနိုင်စွမ်းလည်းငါတို့လျင်မြန်စွာတုနျ့ပွနျနှငျ့အညီဆိုက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာက, သင့်အကြိုက်နှင့်မကြိုက်နားလည်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်အနေဖြင့်ကွတ်ကီးကိုကျဘျဆိုကျရဲ့အကြောင်းအရာ, လုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်မြန်နှုန်းတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကဝဘ်ဆိုဒ်အပေါ်ဖြုန်းအခြိနျ, တတ်နိုင်သမျှအသုံးဝင်သောနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ cookies များကိုအသုံးပြုပါ။
cookie ကိုနေရာချထားခြင်းမရှိဘဲတကယ်တော့, website တစ်ခုသင်၏နောက်ခရီးစဉ်ကိုအဘို့သင့်အကွိုကျမအောက်မေ့နိုင်ပါ။
ဒီအားလုံးအကြောင်းကိုသတိရဖို့အရေးကြီးဆုံးအရာအချို့ cookies တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုကြသည်နေတုန်း, သူတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသငျသညျကိုဖေါ်ထုတ်သို့မဟုတ်သင်နေသောကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်အသုံးပြုမရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဤတွင်ကျနော်တို့ကဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြု cookies များကိုအားလုံး၏တစ်ဦးလျှပ်တစ်ပြက်င်:
6.3) ပထမနှင့် Third-party cookies တွေကို
ငါတို့အားဖြင့်သတ်မှတ် cookies များကို '' ပထမဦးဆုံးပါတီ cookies များကို '' ဟုခေါ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသူတွေဟာ '' Third-party cookies များကို '' ဟုခေါ်ကြသည်။
third-party cookies များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အခြားကုမ္ပဏီများအားဖြင့်ငါတို့အားပေးထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုန်ဆောင်မှုများ, ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုများအဖြစ်အကြောင်းအရာနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှဧည့်သည်များကို enable ။ အလားတူ cookies များကိုလည်း website ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။
6.4) ကြိမ်မြောက်နှင့်ဇွဲ cookies တွေကို
အများဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဝသကဲ့သို့, ငါတို့သည်လည်းလည်းကျန်ကြွင်းသော '' ဇွဲ cookies များကို '' အဖြစ်လူသိများ '' အမြဲတမ်း cookies များကို '' အတူသင်တို့သည်ငါတို့၏ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏ browser ကိုပိတ်လိုက်တစ်ချိန်ကဖျက်ပစ်ကြသည်အချိန်အရှည်အဘို့ကိုသာတည်ရှိနေသည့် '' session ကို cookies တွေကို 'ကိုအသုံးပြုဖို့ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုလာမယ့်အချိန်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အဆင်သင့်သင့် browser မှာသိမ်းထားတဲ့။
6.5) မရှိမဖြစ် cookies တွေကို
သင်သည်ထိုသူတို့မပါဘဲဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရယူလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မရှိမဖြစ် cookies များကိုဝေဖန်ကြသည်။
6.6) စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို cookies တွေကို
ဤရွေ့ကား cookies များကိုဗီဒီယိုများကဲ့သို့နေရာလေးကို features တွေ၏ display ကိုအာမခံပါသည်။
Youtube ကို: အကျဘျဆိုကျမှာအသုံးပွုတဲ့ third-party cookies များကို။
6.7) Analytics မှနှင့်စိတ်ကြိုက် cookies တွေကို
ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များကအသုံးပြုလျက်ရှိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများတွေဟာဘယ်လောက်လူကြိုက်များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်မည်သို့သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်စိတ်ကြိုက် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။
ငါတို့သည်လည်းငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဝက်ဘ်ဆိုက် customize နှင့်သင်တတ်နိုင်သမျှသက်ဆိုင်ရာတွေ့မြင်အကြောင်းအရာအောင်ကူညီရဒေတာကိုသုံးပါ။
ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြု third-party cookies များကို: Google Analytics, Facebook, LinkedIn တို့က, Twitter Contact Form 7, Flamingo, Popup လေးဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရား။
ဤရွေ့ကား cookies များကိုသင်တို့ကဲ့သို့ဧည့်သည်များ Third-party လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာမျက်နှာများနဲ့ content share ခွင့်ပြုပါ။
ယင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြု third-party cookies များကို: Google+ မှာ, Facebook, LinkedIn တို့က, Twitter, Pinterest, Instagram ကို, VK, Reddit, Tumblr သည်။
6.9) သင်မည်သို့ cookies များကိုစီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ် disable နိုင်မလဲ?
သငျသညျကိုသတ်မှတ်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါတိုင်း cookies များကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်ရန်ထိန်းချုပ်ထားပေမယ်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနှင့်ဒေသများအချို့ကိုရန်သင့်သုံးစွဲနိုင်ကန့်သတ်စေခြင်းငှါ, cookies တွေကိုငြင်းပယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြပါလျှင်သတိရကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းထားသည့် cookies များကိုဖျက်ပစ်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဘယ်လိုအသေးစိတ်အတွက်သင်ယူဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက် www.aboutcookies.org သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
7. ပြင်ပ Links များ
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းမှုကိုတတိယပါတီများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလင့်များဆံ့နိုငျသညျ - ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဆက်နွယ်ကြသည်မဟုတ်သူကိုပံ့ပိုးပေးဖို့။ သင်က link ကို click ပြီးနောက်ကျနော်တို့မရှိတော့, (ဥပမာအားဖြင့် IP လိပ်စာသို့မဟုတ်အရာပေါ်တွင် link ကိုဆိုဒ်၏ URL ကို link ကိုနှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက်တတိယပါတီများမှလွှဲပြောင်းကြောင်းမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အသုံးချစုဆောင်းခြင်းအပေါ်မည်သည့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိ တတိယပါတီများ၏အပြုအမူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြီးတော့သဘာဝကျကျဆုတ်ခွာအတိုင်း,) တွင်တည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တတိယပါတီများအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ဒီလိုမျိုး၏အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်တာဝန်အဘယ်သူမျှမယူဆ။
သင်သည်သင်၏အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုရည်မှတ်ငါတို့ထံမှသတင်းအချက်အလက်များရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, သငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျအနေဖြင့်စီမံဆောင်ရွက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုညာဘက်ပြဋ္ဌာန်းရန်နိုင်ပါတယ်။
ဥပဒေလိုအပ်ချက်စေ့အဖြစ် insofar - - သင့်အချက်အလက်များ၏ပြီးစီးသို့မဟုတ်ဖျက်မှုကိုသငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှမှားယွင်းသောအချက်အလက်များ၏ချက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်မှာငွေတောင်းခံမှုသို့မဟုတ်စာရင်းကိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောများမှာဒါမှမဟုတ်ပြဌာန်း retention ကိုတာဝန်မှဘာသာရပ်သောဒေတာများလျှောက်ထားမထားဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောဒေတာဖို့လက်လှမ်းမလိုအပ်ပါ Insofar သကဲ့သို့, အပြောင်းအလဲနဲ့ သိ. (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကန့်သတ်လိမ့်မည်။
ဥပဒေလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံသကဲ့သို့သင်တို့ insofar ကျွန်တော်တို့ကိုမှသင်၏အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကန့်သတ်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
သင်က data တွေကိုတတိယပါတီမှကူးစက်ဖြစ်ကြောင်းတောင်းဆိုရန်, သငျသညျအဖြစ်ဝေးဒီနည်းပညာပိုင်းဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့တစ်ဦးဖွဲ့စည်းပုံမှာ, သမားရိုးကျနှင့်စက်-ဖတ်လို့ရအောင်ပုံစံသို့မဟုတ်ကူးစက်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်းဒေတာရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
8.5.1 ကန့်ကွက်၏) ဖြစ်ရပ်မှန်-related ညာဘက်
ကျွန်တော်တစ်ဦးလွှမ်းမိုးတရားမျှတအကျိုးစီးပွားအခြေခံပေါ်မှာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဆောင်ရွက်ရန် Insofar အတိုင်းဤဒေတာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမူဝါဒကိုယ်စားပြုအဖြစ်, သင်သည်သင်၏အထူးအခွအေနေကနေရရှိလာတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်, မည်သည့်အချိန်တွင်မ, ဒီအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ခုကန့်ကွက် file ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏အကျိုးစီးပွား, အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ထင်ရှားသောအရာပြဌာန်းချက်စည်းမျဉ်းများ, နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုခံထိုက်သောမဖြစ်မနေအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူအညီ, သက်သေပြနိုင်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်, ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဆိုပါအခိုင်အမာတာဝန်ထမ်းဆောင်သည်မှန်လျှင်, လေ့ကျင့်ခန်းကျနော်တို့ထို့နောက်သင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုရပ်ဆိုင်းကြောင်းပါလိမ့်မယ် သို့မဟုတ်တရားဝင်တောင်းဆိုမှုများ၏ခုခံကာကှယျ။
8.5.2 တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဆန့်ကျင်) ကန့်ကွက်
ထို့အပွငျသင်သည်မည်သည့်အချိန် ( "ကြော်ငြာမှကန့်ကွက်") မှာစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ခုကန့်ကွက် file နိုင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကန့်ကွက်ကာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကမ်ပိန်း၏နယ်ပယ်၌သင်တို့၏အချက်အလက်များ၏အသုံးချအကြားတစ်ဦးထပ်ရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုယူပေးပါ။
သင်သည်သင်၏အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးပြီလျှင်သင်မည်သည့်အချိန်တွင်အနာဂတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဤပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းရုတ်သိမ်းမဟုတ်လျှင်ထို့ကြောင့်ကြိုတင် 25. မေလ 2018. သင့်ရဲ့အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့များ၏တရားဝင်မှုထိခိုက်နေကြလိမ့်မည်, မတိုင်မီ GDPR ၏တရားဝင်မှုကိုခွင့်ပြု, သဘောတူညီချက်များ၏ကြေညာချက်များ၏ရုပ်သိမ်းခြင်းသက်ဆိုင်သည်။
သငျသညျဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာတစ်ခုအယူခံတင်သွင်းခွင့်ရှိသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, သငျသညျဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်၏နေထိုင်ရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုအရည်အချင်းသောဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာဖို့သင့်နေရာအရည်အချင်းသောဒေတာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာ, ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ COPPA ၏လိုအပ်ချက်များ (ကလေးများအွန်လိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေ) နဲ့လိုက်နာမှု၌ရှိကြ၏, ငါတို့အသက် 13 နှစ်အောက်မည်သူမဆိုထံမှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းကြပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်, ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအားလုံးကအနည်းဆုံး 16 နှစ်အဟောင်းသို့မဟုတ်အထက်၌နေသောသူသည်လူများတို့အားညွှန်ကြားလျက်ရှိသည်။
တရုတ်ပြင်ပ မှစ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်လာရောက်လည်ပတ် 11.
သငျသညျတရုတ်ပြင်ပမှကြှနျုပျတို့၏ website လာရောက်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုမှလွှဲပြောင်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်လုပ်ငန်းများ၌စေခြင်းငှါသတိပြုမိလိမ့်ပေးပါ။
အဆိုပါဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သင့်ဒေတာတွေကိုသင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာသူများကဲ့သို့ပြည့်စုံမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ပြောင်းရွှေ့စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ privacy ကိုကာကွယ်ပေးကြောင်းသေချာစေရန်ခြေလှမ်းများယူကြောင်းအာမခံရမည်ကျေးဇူးပြုပြီးကြောင်းတရုတ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများတွင်၏အခြားဥပဒေများ။
ငါတို့သည်ငါတို့၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီပြောင်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်, ငါတို့သည်ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိပြောင်းလဲမှုများ post ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မူ၏ date: 28.05.2018